Soomaalilaan Sadex iyo Toban Sanadood ka dib
Sunday March 11, 2018 - 08:20:57 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Soomaalilaan Sadex iyo Toban Sanadood ka dib Suxufiyiinta Madaxa banaan ee jabsada wararka sanaaduuqda ku xidhan xarunta Fanka iyo Saxaafadda Soomaalida ee Hargeysa, sida Badri Koosaar iyo Faysal Fiifa, waxaa kusoo biiraya kuwo kale oo iyagana lagu xanto inay gacansaar la leeyihiin Sirdoonka, waxaa iyagana la tuhmayaa weriyayaal ruug cadaayo ah oo gaadhey heer ay wada hadalsiiyaan Madaxda Geeska, inkastoo lagu wareeray hay'ada Somalilaan ee ay xidhiidhka la leeyihiin ta ay tahay, Arimaha Dibeda iyo Madaxtooyada.
Somaliland waxaa ku nool Malaayiinkii u dhashay iyo Boqolaal kun oo qof oo Ajnebi ah, iyagoo Shisheeyahaasi ka kala yimid dhamaan dunida dacaladeeda, hadduu Hindi, Amxaari, Carabi iyo Ingiriisi ku hadli jirey, iminka waxay ku hadlayaan Lahjadda Somaliland oo tarax la', halka wadanka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya ku hadlayo jajab iyo guraangur laysu geegeeyey oo isugu jira Talyaani, Ingiriisi, Sawaaxili iyo Soomaali, dadka ku noolina ay u bateen kuwo Kamas leh.
Magaalada Berbera oo uu ku yaallo Saldhiga Ciidamada Imaaraatka ayaa waxaa ka dhex muuqda Diyaaradaha Somaliland Airways iyo kuwo u gaar ah Ganacsatada waaweyn ee dalka, iyadoo halkaa loogu sameeyo wixii dayactir ah. Waxaa iyaguna halkaas deggan ciidamo isugu jira kuwa Somaliland iyo kuwa dawladda Faddaraalka Iitoobiya oo iminka uun kasoo noqday dhulka Gubanka, Dhoolo tus iyo Dab rid ay la sameeyeen ciidamada Imaaraatka.
Waddada isku xidha Hargeysa iyo Laascaanood, inta Ishaadu wax ka aragto waxaa ka muuqda boqolaal Hecter oo Beero kala duwan ah, shaqaale iyo Hawl wadeeno ayaa ku laba lisaya qalab kala duwan oo isugu jira kuwa wax soo saarka iyo biyo gelinta. Sool, Saraar, Sanaag iyo Togdheer waxaa ka abuurmay wershado yaryar iyo Qodaallo dhafan oo reeruhu deganyihiin, Boorame waxay noqotay xarun waxbarasho iyo mid dalxiis sidii waddada Jabuuti ku xidha loo dhamaystiray, dadka Jabuuti kasoo Xagaa baxayaana way sadex laabmeen, reer Boorame markay doonaan Faransiis bay ku hadlaan oo iminka suurahoodu wuxuu marayaa inay labada-ba isku qabtaan.
Ardaydii ugu maskaxda wanaagsanayd ee shan sanadood horteed loo kala diray waxbarashada dalka gudihiisa iyo dibadiisa ayaa hormuud u ah laamaha kala duwan ee dawlada, iyagoo waaxyaha ay ka shaqeeyaan kusoo kordhiyey tamar cusub iyo aqoontii loo baahnaa. Jaamacadaha wadanku Toban kama badna kadib markii ay badankoodii isku biireen, qaarna loo casiley Iskuulo xirfadeed iyo Macaahid Farsamo
Magaalada Hargeysa iyo Jabuuti waxaa isku xidhan iftiinka laydhka iyo waddooyin wanaagsan, dadweynaha labada dhinacna waxay isu dhaafayaan sida dad waddan keliya ku wada nool. Magaalada Wajaale waxay u muuqaal egtahay Jigjiga halka reer Berbera Cigaalka iyo anaa Muwaadin lagu dacaayadeeyo. Kala badh in ka yar uun baa ka hadhay heshiiskii ay dib ula soo noqon lahaayeen reer Somaliland Dekeda iyo Saldhiga Berbera oo caalami ah.
Yoocadda waxaa darban ciidan xoog waaweyn oo uu horjooge u yahay Ararsan Shaarubo weyn, wuxuu isha la raacayaa Kambuyuutar uu ka daawanayo Kamarado ku xidhan Kun talaabo, Xadka labada dal u dhexeeya, ciidanka Somalilaan wuxuu shiiqiyey kana hub, dirays iyo kala dambayn wanaagsan yahay kuwa boodhka, niyad xumaanta iyo macaluushu ka muuqato ee kasoo jeeda dhinaca Qabaa'ilka Fadaraalka Soomaaliya.
Tababar kooban ka dib, Arday kasta oo dhamaystay Jaamacad waxaa dirayska ciidanku u yaal gurigiisa, halka qorigana uu ka qaadan karo saldhiga Bilayska ee ugu dhow marka loo baahdo, Hablaha ayaa iyagana loo tababaray gargaarka degdega ah iyo wadista gaadiidka caafimaadka. waxaana lixdii bilood-ba mar laysugu yeedhaa Taliska ciidanka ee Gobolka.